Ny fahatezeran'Andriamanitra - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-03 > Fahatezeran'Andriamanitra
Izao no voasoratra ao amin’ny Baiboly: “Andriamanitra dia fitiavana” (1. Johannes 4,8). Nanapa-kevitra ny hanao soa amin’ny fanompoana sy ny fitiavana ny olona izy. Asehon’ny Baiboly koa anefa ny fahatezeran’Andriamanitra. Ahoana anefa no ahafahan'ny olona iray izay manana fitiavana madio dia misy ifandraisany amin'ny fahatezerana?
Tsy misaraka ny fitiavana sy ny hatezerana. Noho izany dia afaka manantena isika fa ny fitiavana, ny faniriana hanao ny tsara dia misy koa ny fahatezerana na fanoherana izay zavatra mandratra sy manimba. Tsy miova ny fitiavan’Andriamanitra ary noho izany Andriamanitra dia manohitra izay rehetra manohitra ny fitiavany. Izay manohitra ny fitiavany dia fahotana. Andriamanitra dia manohitra ny ota - miady aminy izy ary hanafoana azy amin'ny farany. Andriamanitra dia tia olona, ​​fa tsy tiany ny ota. Na izany aza, ny "tsy faly" dia malefaka loatra raha lazaina izany. Halan'Andriamanitra ny ota satria fanehoana fankahalana ny fitiavany izany. Izany dia manazava ny dikan’ny hoe fahatezeran’Andriamanitra araka ny Baiboly.
Andriamanitra dia tia ny olona rehetra, anisan’izany ny mpanota: “Samy mpanota avokoa izy rehetra ka tsy manana voninahitra tokony hananany eo anatrehan’Andriamanitra, ary hamarinina tsy amin’antony amin’ny fahasoavany amin’ny fanavotana izay tonga tamin’ny alalan’i Kristy Jesosy.” ( Romana 3,23-24). Na dia fony mbola mpanota aza isika, dia naniraka ny Zanany ho faty ho antsika Andriamanitra, hanafaka antsika amin’ny fahotantsika (avy amin’ny Romana). 5,8). Manatsoaka hevitra isika fa tia ny olona Andriamanitra, nefa mankahala ny fahotana izay manimba azy. Raha toa ka tsy azo ihodivirana amin’izay rehetra manohitra ny zavaboariny sy ny zavaboariny Andriamanitra ary raha tsy manohitra ny fifandraisana marina aminy sy ny zavaboariny Izy, dia tsy ho fitiavana tsy misy fepetra sy feno. Tsy momba antsika Andriamanitra raha tsy manohitra izay manohitra antsika Izy.
Ny andinin-teny sasany dia mampiseho fa tezitra amin'ny olona Andriamanitra. Saingy Andriamanitra tsy te hampijaly olona velively, fa tiany ho hitan'izy ireo fa manimba azy ireo sy ny manodidina azy ny fomba fiainany mpanota. Tian’Andriamanitra hiova ny mpanota mba hialana amin’ny fanaintainana ateraky ny ota.
Ny fahatezeran’Andriamanitra dia mampiseho fa ny fahamasinan’Andriamanitra sy ny fitiavany no tafihin’ny fahotan’ny olombelona. Mankahala ny lalany ny olona miaina ny fiainany ivelan’Andriamanitra. Mihetsika toy ny fahavalon’Andriamanitra ny olona lavitra sy mankahala toy izany. Koa satria mandrahona izay tsara sy madio rehetra izay maha-Andriamanitra sy ijoroany ny olona, ​​dia manohitra tanteraka ny lalana sy ny fanaon’ny fahotana Andriamanitra. Ny fanoherany masina sy feno fitiavana amin’ny karazana fahotana rehetra dia antsoina hoe “Fahatezeran’Andriamanitra”. Andriamanitra dia tsy misy ota - masina tanteraka ao amin'ny tenany sy ny tenany. Raha tsy nanohitra ny fahotan’ny olona izy, dia tsy ho tsara. Raha tsy tezitra tamin’ny ota izy ary tsy nitsara ny ota, dia neken’Andriamanitra tamin’ilay asa ratsy fa tsy ratsy tanteraka ny fahotana. Lainga izany, satria ratsy tanteraka ny fahotana. Tsy afaka mandainga anefa Andriamanitra ka mitoetra ho marina amin’ny tenany, satria mifanitsy amin’ny ao anatiny indrindra, izay masina sy be fitiavana. Manohitra ny ota Andriamanitra amin’ny fandrafiana azy io satria hesoriny tsy ho eo amin’izao tontolo izao ny fijaliana rehetra ateraky ny ratsy.
Famaranana ny fifandrafiana
Efa nandray ny fepetra ilaina anefa Andriamanitra mba hampitsaharana ny fifandrafiana eo amin’ny tenany sy ny fahotan’ny olombelona. Ireo fepetra ireo dia mikoriana avy amin’ny fitiavany, izay fototry ny maha-izy azy: «Izay tsy tia dia tsy mahalala an’Andriamanitra; satria Andriamanitra dia fitiavana »(1. Johannes 4,8). Noho ny fitiavana, dia avelan’Andriamanitra hifidy ho an’ny tenany na hanohitra ny zavaboariny. Avelany hankahala azy mihitsy aza izy ireo, na dia toheriny aza izany fanapahan-kevitra izany, satria manimba ny olona tiany izany. Eny tokoa, hoy izy hoe "tsia" aminy "tsia". Amin’ny filazana hoe “tsia” amin’ny “tsiantsika”, dia manamafy ny “eny” nataony amintsika ao amin’i Jesosy Kristy izy. «Tamin’izany no nisehoan’ny fitiavan’Andriamanitra antsika, dia ny nanirahan’Andriamanitra ny Zanany lahitokana ho amin’izao tontolo izao, mba hahavelona antsika amin’ny alalany. Izao no fitiavana: tsy ny nitiavantsika an’Andriamanitra, fa ny nitiavany antsika, ka nirahiny ny Zanany ho avotra noho ny fahotantsika.”1. Johannes 4,9- iray).
Efa nanao ny dingana rehetra ilaina Andriamanitra, tamin’ny vidiny avo indrindra ho an’ny tenany, mba ho voavela sy ho voafafa ny fahotantsika. Maty ho antsika Jesosy, nisolo toerana antsika. Ny maha-ilaina ny fahafatesany ho famelan-keloka antsika dia mampiseho ny halehiben’ny fahotantsika sy ny helotsika, ary mampiseho ny vokatry ny ota amintsika. Halan’Andriamanitra ny ota mahatonga fahafatesana.
Rehefa manaiky ny famelan-keloka avy amin’Andriamanitra ao amin’i Jesosy Kristy isika, dia miaiky fa olombelona mpanota isika ka manohitra an’Andriamanitra. Hitantsika ny dikan’ny hoe manaiky an’i Kristy ho Mpamonjy antsika. Ekentsika fa tafasaraka amin’Andriamanitra isika amin’ny maha-mpanota antsika ka mila fampihavanana. Fantatsika fa tamin’ny alalan’i Kristy sy ny asa fanavotana nataony no nahazoantsika ny fampihavanana, ny fiovana fototra eo amin’ny maha-olombelona antsika, ary ny fiainana mandrakizay ao amin’Andriamanitra ho fanomezana maimaim-poana. Mibebaka amin’ny “tsia” ataontsika amin’Andriamanitra isika ary misaotra azy noho ny “eny” nataony tamintsika tao amin’i Jesosy Kristy. Ao amin’ny Efesianina 2,1-10 Lazain’i Paoly ny lalan’ny olona eo ambanin’ny fahatezeran’Andriamanitra mankany amin’izay mandray ny famonjena amin’ny alalan’ny fahasoavan’Andriamanitra.
Ny fikasan’Andriamanitra hatramin’ny voalohany dia ny haneho ny fitiavany ny olona amin’ny famelana ny fahotan’izao tontolo izao amin’ny alalan’ny asan’Andriamanitra ao amin’i Jesosy (avy amin’ny Efesiana). 1,3-8e). Miharihary ny toe-javatra misy ny olona eo amin’ny fifandraisany amin’Andriamanitra. Na inona na inona “fahatezerana” nananan’Andriamanitra, dia nikasa ny hanavotra ny olona ihany koa Izy talohan’ny nahariana izao tontolo izao “fa navotan’ny ra soan’i Kristy ho toy ny Zanak’ondry tsy manan-tsiny sy tsy misy tsiny. Na dia voafidy talohan’ny nanorenana izao tontolo izao aza Izy, dia haseho amin’ny andro farany noho ny aminareo » (1. Petrus 1,19-20). Izany fampihavanana izany dia tsy amin’ny alalan’ny fanirian’olombelona na ny ezaka atao, fa amin’ny alalan’ny olona sy ny asa fanavotana nataon’i Jesoa Kristy ho antsika irery ihany. Io asa fanavotana io dia natao ho “fahatezerana feno fitiavana” amin’ny fahotana sy ho antsika tsirairay. Tsy iharan’ny fahatezerana intsony ny olona “ao amin’i Kristy”, fa miaina amim-piadanana amin’Andriamanitra.
Ao amin’i Kristy dia voavonjy amin’ny fahatezeran’Andriamanitra isika olombelona. Miova tanteraka isika noho ny asam-pamonjeny sy ny Fanahy Masina mitoetra ao anatiny. Andriamanitra no nampihavana antsika taminy (avy amin’ny 2. Korintiana 5,18); tsy te hanasazy antsika izy, fa i Jesoa no nitondra ny famaizana antsika. Misaotra sy mandray ny famelan-keloka sy ny fiainam-baovao ao anatin’ny tena fifandraisana Aminy isika, mitodika amin’Andriamanitra ary miala amin’izay sampy rehetra eo amin’ny fiainan’ny olombelona. «Aza tia izao tontolo izao na izay eo amin’izao tontolo izao. Raha misy tia izao tontolo izao, dia tsy misy fitiavana ny Ray ao anatiny. Fa izay rehetra eo amin'izao tontolo izao, dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny fiavonavonana, dia tsy avy amin'ny Ray, fa avy amin'izao tontolo izao. Ary mandalo izao tontolo izao miaraka amin'ny filany; fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay.”1. Johannes 2,15-17). Ny famonjena antsika dia ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Kristy - "Izay mamonjy antsika amin'ny fahatezerana ho avy" (1. Tes 1,10).
Lasa fahavalon’Andriamanitra ny olombelona noho ny toetran’i Adama, ary io fankahalana sy tsy fahatokisana an’Andriamanitra io dia miteraka fanoherana tsy maintsy atao avy amin’ilay Andriamanitra masina sy be fitiavana - ny fahatezerany. Hatramin’ny voalohany, noho ny fitiavany, Andriamanitra dia nikasa ny hampitsahatra ny fahatezeran’olombelona amin’ny alalan’ny asa fanavotana nataon’i Kristy. Noho ny fitiavan’Andriamanitra no nampihavanina taminy tamin’ny alalan’ny asa fanavotana nataony tamin’ny fahafatesan’ny Zanany sy ny fiainan’ny Zanany. “Koa mainka ny hamonjeny antsika ho afaka amin’ny fahatezerana, satria ny rany no nanamarinana antsika. Fa raha nampihavanina tamin’Andriamanitra tamin’ny fahafatesan’ny Zanany isika fony mbola fahavalontsika, mainka ny hamonjena antsika amin’ny fiainany, rehefa nampihavanina isika » (Romana). 5,9- iray).
Nikasa ny hanafoana ny fahatezerany ara-drariny tamin’ny olombelona Andriamanitra, na dia talohan’ny nipoiran’izany aza. Ny fahatezeran'Andriamanitra dia tsy azo ampitahaina amin'ny fahatezeran'olombelona. Ny tenin'olombelona dia tsy misy teny ho an'ny karazana fanoherana mihelina sy efa voavaha amin'ny olona izay manohitra an'Andriamanitra. Mendrika ny famaizana izy ireo, saingy tsy ny hanafay azy no fanirian’Andriamanitra fa ny hanafaka azy amin’ny fanaintainana ateraky ny fahotany.
Ny teny hoe fahatezerana dia afaka manampy antsika hahatakatra ny halehiben’ny fankahalan’Andriamanitra ny fahotana. Ny fahatakarantsika ny teny hoe fahatezerana dia tsy maintsy ahitana foana ny hoe ny fahatezeran’Andriamanitra dia mitodika hatrany amin’ny fahotana, fa tsy amin’ny olona mihitsy satria tiany izy rehetra. Efa nanao zavatra Andriamanitra mba hitsaharan’ny fahatezerany amin’ny olona. Mitsahatra ny fahatezerany amin’ny ota rehefa rava ny vokatry ny fahotana. “Ny fahafatesana no fahavalo farany horinganina” (1. Korintiana 15,26).
Misaotra an’Andriamanitra isika fa nitsahatra ny fahatezerany rehefa resy sy rava ny ota. Manana toky isika amin’ny teny fikasana ny amin’ny fiadanany, satria izy no nandresy ny ota indray mandeha tao amin’i Kristy. Nampihavana antsika taminy Andriamanitra tamin’ny alalan’ny asa fanavotana nataon’ny Zanany, ka nampitony ny fahatezerany. Koa ny fahatezeran’Andriamanitra dia tsy miantefa amin’ny fitiavany. Ny fahatezerany kosa dia manompo ny fitiavany. Ny fahatezerany dia fomba iray hanatrarana ny fikasana feno fitiavana ho an'ny rehetra.
Satria mahalana, raha misy, ny fahatezeran’olombelona, ​​dia tsy mahatanteraka ny fikasana feno fitiavana, dia tsy afaka mamindra ny fahatakarantsika olombelona sy ny traikefantsika momba ny fahatezeran’olombelona amin’Andriamanitra isika. Rehefa manao izany isika dia manao fanompoan-tsampy sy maka sary an-tsaina an’Andriamanitra ho toy ny olombelona. Malagasy 1,20 dia milaza mazava fa “ny fahatezeran’ny olona tsy manao izay mahitsy eo anatrehan’Andriamanitra”. Tsy haharitra mandrakizay ny fahatezeran’Andriamanitra, fa ny fitiavany tsy miova.
Ireto misy andinin-teny manan-danja. Mampiseho fampitahana eo amin’ny fitiavan’Andriamanitra sy ny fahatezerany masina izy ireo, mifanohitra amin’ny fahatezeran’olombelona izay iainantsika amin’ny olona lavo:
“Fa ny fahatezeran’ny olona tsy manao izay mahitsy eo anatrehan’Andriamanitra” (Jakoba 1,20).
“Raha tezitra ianao, aza manota; aza avela ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo » (Efes 4,26).
“Tsy hanao araka ny firehetan’ny fahatezerako Aho, ary tsy hanimba an’i Efraima intsony. Satria Andriamanitra aho fa tsy olona, ​​masina eo afovoanao. Izany no tsy ihaviako amin’ny fahatezerana handrava» (Hosea 11,9).
« Te-hanasitrana ny fivadiham-pony aho; Tiako ny ho tia azy; fa efa niala taminy ny fahatezerako » (Hosea 14,5).
«Aiza moa Andriamanitra tahaka Anao, izay mamela heloka sy mamela ny heloky ny sisa amin’ny lovany; izay tsy mifikitra amin’ny fahatezerany mandrakizay, fa ny fahasoavany no sitrany! (Micha 7,18).
“Ianao dia Andriamanitra mamela heloka, miantra, mamindra fo, mahari-po ary be famindram-po” (Nehemia). 9,17).
"Tamin'ny andro fahatezerana dia nanafenako kely taminao ny tavako, fa amin'ny fahasoavana mandrakizay kosa no hamindrako fo aminao, hoy Jehovah, Mpanavotra anao" (Isaia 5.4,8).
«Tsy lavitry ny Tompo mandrakizay; nefa malahelo mafy izy ka mamindra fo araka ny haben’ny hatsaram-panahiny. Satria tsy mampahory sy mampalahelo ny olona amin’ny fo izy. ... Inona no imenomenon’ny olona eo amin’ny fiainana, ny tsirairay momba ny vokatry ny fahotany? (Fitarainana 3,31- iray).
"Moa ataonareo fa mahafinaritra ahy ny fahafatesan'ny ratsy fanahy, hoy Jehovah Tompo, fa tsy ny hialany amin'ny lalany mba ho velona?" (Ezekiela 18,23).
«Ny fonareo no triatriaro, fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin’i Jehovah Andriamanitrareo! Fa miantra Izy, mamindra fo, mahari-po ary be famindram-po, ka tsy ho ela dia hanenina ny famaizana Izy » (Joela) 2,13).
“Nivavaka tamin’i Jehovah i Jona ka nanao hoe: Tompo ô, izany no noheveriko fony aho mbola tany amin’ny taniko. Izany no nahatonga ahy handositra ho any Tarsisy; fa fantatro fa mamindra fo, mamindra fo, mahari-po ary be famindram-po Hianao ka manenina ny amin’ny ratsy” (Jona. 4,2).
«Ny Tompo tsy mitaredretra ny teny fikasana, araka izay heverin’ny sasany ho fahatarana; fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba hahitan’ny olona rehetra ny fibebahana.”2. Petrus 3,9).
“Tsy misy tahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. Fa ny tahotra miandry famaizana; fa izay matahotra dia tsy tanteraka amin'ny fitiavana" (1. Johannes 4,17 farany ampahany-18).
Rehefa mamaky isika fa «Lehibe tokoa ny fitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanany ho amin’izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao.” (Jaona. 3,16-17), dia tokony ho takatsika tsara avy amin’io fihetsika io fa “tezitra” amin’ny fahotana Andriamanitra. Fa amin’ny fandringanana ny fahotany, Andriamanitra dia tsy manameloka ny mpanota, fa mamonjy azy amin’ny ota sy ny fahafatesana mba hanolotra sy hanome azy ny fampihavanana sy ny fiainana mandrakizay. Ny “fahatezeran’Andriamanitra” dia tsy natao “hanameloka izao tontolo izao” fa mba handrava ny herin’ny ota amin’ny endriny rehetra mba hahitan’ny olona ny famonjena azy sy hiaina ny fifandraisana maharitra sy velona amin’ny fitiavana an’Andriamanitra.